West Yangon Technological University | StudentBoard
WYTU Memories Board
ကျောင်းတုန်းက ရည်စားဟောင်းတွေကို လွမ်းတယ် 🤪🤪
စကားလုံးဖြင့် မဖော်ပြနိုင်သော အမှတ်တရများ
ဘ၀၏ပြော၍မကုန်သောအမှတ်တရများစွာရှိသောနေရာ ... We ❤️ WYTU
အမှတ်တရတွေမှ အစုံပဲ။ ☺️☺️ ကျောင်းတတ်ရင်း ကန်တင်းက ဦးမောင်ရဲ့ ကြက်ဥချိုချဉ်နဲ့ ကန်စွန်းပလိန်းကိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြိုင်တူ လုစားရတဲ့ အရသာက အခုချိန်ထိဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး 😣
ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပညာရပ်များ ဆရာ ဆရာမများ နှင့် ပြောမနာဆိုမနာ အတွင်းသိအဆင်းသိ သူငယ်ချင်းများရရှိခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့ မေ့နိုင်လိမ့်မယ်မထင်တော့ပါဘူး အရမ်းလွမ်းနေပါတယ် ကျောင်းတော်ကြီးရယ်🤔🤔🤔
အဆောင်၉ နဲ့ ၇ ကြားက အငဲရဲ့ "ဒီကွင်းပြင်ကြီးကို တို့ဖြတ်ဖူးတယ်.." 😄
သူငယ်ချင်းတွေစည့းစည်းလုံးလုံးနဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင် ပျော်ပျော်ပါးပါး ဦးစီးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ major basketball ပြိုင်ပွဲတွေပါ
အမှတ်တရကတော့ ကျောင်းပီးလို့ BE ရတဲ့ အချိန်ထိ စော် မရ ခဲ့တာပဲ 😬
မမေ့နိုင်တဲ့ အမှတ်တရတွေအများကြီးပါပဲ။ ကျောင်းပြီးသွားပေမယ့် အရမ်းသတိရရင် လာဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ်ပြီးလည်းလာပါဦးမည် 😍 ကျောင်းတောင်ပြန်တက်ချင်လာပြီ
1st batch မှာတတ်ခဲ့ရလို့ ဘာလို့ မှန်းမသိကို ဂုဏ်ယူနေတာမျိုး 🥰
တစ်ကျောင်းလုံးမှာ ကိုယ်တွေပဲရှိတော့တယ် Uno ဆော့လိုက် စိန် ပြေးလိုက်တမ်းဆော့လိုက်နဲ့ ၄ ယောက်သား အဆောင် ၅ မှာ အဆင်တွေပြေနေတာ🤣
တက်ဖူးသမျှ​ကျောင်းထဲ အလွမ်းဆုံးဘဲ WYTU 😍
UNO အဆော့လွန်ချက်က bus ​ပေါ်မှာပါ မချန်ဘူး​နော်... 😂😂😂 ယိုးဒယားကြာဇံပြုတ်ရယ် ကန်စွန်းပလိန်းချဥ်စပ်ရယ် အားလူး​ချောင်း​ကြော်ရယ် လွမ်းလိုက်တာ😣😣
ဦးမောင်ကန်တင်းက ရခိုင်ထမင်းသုပ်ကိုပြန်စားချင်တယ် သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရတယ်
ဘွဲ့ရတဲ့အထိ အတန်းတက်ချိန် အကြိမ် ၂၀ မကျော်ဖူးဘူးထင်တာပဲ
First year မှာအပျော်ဆုံးပဲ အဆောင် ၆ အိမ်သာထဲက ရေတွေက်ုပုံးနဲ့ခပ်ပြီး အောက်ကော်ရေတာက ဖြတ်သွားတဲ့သူတွေကို ပုံးလိုက်လောင်းချတာ MC နဲ့ EP ကကောင်တွေလား မသိဘူး ရန်ဖြစ်ကြလို့ ကျောင်းကားမှန်တွေ ခဲနဲ့ထုခံရတာ ၃၆ ကို ခုံမရဘဲ သမိုင်းကနေ လှိုင်သာယာအထိ စီးရတာ တစ်ပတ်ကို ၂ ခါ လှိုင်သာယာကနေ စမ်းချောင်းအထိသွားပြီး ၂၀၀ တန် ရှမ်းခေါက်ဆွဲသွားစားတာ 😁😁😁
ပြောမပြတက်တဲ့အမှတ်တရတွေ တဘဝလုဲးသိမ်းထားမဲ့အရာ‌တွေ ‌ရှိခဲ့ဖူးတယ်
ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ရည်းစားမရခဲ့ဘူး 🤣🤣🤣🤣🤣
စော်ကြည်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေ သတိရတယ် ကွာ 🥴😪
Project ရောင်းစားတဲ့ စီနီယာကျောင်းသားတွေ 😂😂😂
အမှတ်တရကတော့ ပထမဆုံးစဖွင့်တဲ့နှစ်/Very 1st-Batch ကျောင်းသားဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ရတာပေါ့ကွာ 👨‍🎓
ဖိနပ်ကိုချွတ် တစ်ဖက်စီကိုင်ပြီး lab အခန်းထဲက ခိုးထွက်ခဲ့တာအမှတ်ရဆုံးပါပဲ
အမှတ်တရတွေကများသား သတိရဆဲပါ ကျောင်းတော်ကြီးကို
ကြာဇံပြုတ် ချဥ်စပ် တုံယမ်းဟင်းချို အာလူးချောင်းကြော် ပြန်စားချင်တယ် အဆောင် ၁၀ ဘက်က ကော်ဖီအေးလည်း ပြန်သောက်ချင်တယ်
ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး သဘောထားကြီးတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ ကောင်းတူဆိုးဖက် သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကန်တင်းကအစားအသောက်တွေ၊ သွားခဲ့ရတဲ့tripတွေ၊ အိပ်ပျက်ရတဲ့ညတွေ အကုန်လုံးကအမှတ်တရတွေကြီးပါပဲ။ မှတ်မှတ်ရရကတော့ ပထမဆုံးကျောင်းစတက်တော့ ပါမောက္ခ Dr. သက်ဦး ကို အစ်ကို အစ်ကို အဆောင်၆က ဘယ်မှာလဲလို့ သွားမေးမိဖူးတာပဲ။ ဆရာသက်ကလည်းနုတာကိုး။ 😁😁😁
အဲ့တုန်းကအပျော်ရဆုံးအချိန်တွေပဲ နောက်ဆုံးနှစ်လဲရောက်တော့ အတန်းထဲလူအတော်အများနဲ့ခင်သွားပြီ
အရမ်း​ပျော်ခဲ့တယ် roll call ​ကောက်ရင်း​အော်ခဲ့တာ​တွေ စာ​မေးပွဲခန်းအပြင်က​နေ​အော်​ခဲ့တာ​တွေ စာအတူတူလုပ်ခဲ့ကြတာ​တွေ အခုထိမှတ်မိ​နေပါ​သေးတယ် အားရင် state စင်​ပေါ်တက် စာ​တွေသင် ဟာသ​တွေလုပ် တကယ်​ပျော်ခဲ့ပါတယ် အကုန်လုံးကိုသတိရတယ်
ဘယ်နှစ်တုန်းကလဲမသိဘူး ငါတို့မွေးနေ့ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ကျောင်းကန်တင်းမှာ မုန့်တွေအဝစားခဲ့တာတွေ စာမေးပွဲနီးရင် နင့်ဆီအပူကပ် copyတွေတောင်း
2005-2010 1st Batch Now we are very far apart. I miss my university life.
ငါလဲ ( )ခွက် နှစ်ခါလောက် အရိုက်ခံရခဲ့တယ် ဝွန်း အချိန်တိုင်းလိုလိုပျော်စရာကြီးပါကွာ ❤ ငါတို့ အားလုံးစုံဖြစ်ရင် ကန်တင်းထိုင် လျောက်လည်ရအောင် သားကြီးတို့ရာ လွမ်းတယ် ဖဲရူုံးလို့ စားဖို့ပြန်ဖို့မရှိတာကအစ ကျောင်းနေ့ရက်တိုင်းကိုလွမ်းတယ် 😁
ကန်တင်းမှာ ပန်းကန် ပြောင် အောင် သုတ် တဲ့ ကောင် နဲ့ ဗြောက် အိုး ကို မြောင်း ထဲ နှစ် ထား တာတောင် ထ ပေါက် တဲ့ ကောင် နဲ့ ကန်တင်းမှာ ငါ့ ကို လာဆွဲ ဆို တဲ့ ကောင် နဲ့ ဆံပင် ကို victoria ကေ ညှပ် တဲ့ ကောင် နဲ့ ကန်တင်းမှာ မှန်ကြည့် ရင်း ပုဆိုး ဆွဲချွတ် ခံရ တဲ့ ကောင် နဲ့ ကောင်မ လေး နံမည် သွား မေး တာ ဟို က ကျောင်းသား ကဒ် ထုတ် ပြ လိုက် တဲ့ ကောင် နဲ့ ငါ ‌မပြော ချင် ဘူ့ နော့ 🤣🤣🤣
ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျောင်းသားဘဝကိုလွမ်းတယ်...ကျောင်းတော်ကြီးကိုလည်းသတိရတယ်
စိုက်ခင်း တွေဘက်ကနေ ခိုးထွက်တာ ဗွက်တွေ ပေ 176 bus ကား ကို နေရာရအောင် လမ်းလျောက် 😁😁😁😁
အမှတ်တရတွေကတော့ 1Tကနေ 6BEအထိ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံတိုင်း ဘယ်လောက်ပြောပြော ပြောလို့ကိုမကုန်တာ ❣❣❣
ပြောလို့တောင်မကုန်ဘူး...ခြုံပြောရရင် လွမ်းတယ် ပေါ့😌
သူတို့က ဘဝရဲ့အမှတ်တရ 🥰
မိမိအတွေ့အကြုံများအရ ကျောင်းမာရခဲ့သူတွေဟာ... တစ်ကိုယ်တည်း အပျိူကြီးတွေ ဖစ်လေ့ရှိကြောင်းတွေ့ရှိ ... ထိုအပျိူကြီးများ၏သူငယ်ချင်းများမှာ ကျောင်းပြီးချင်း တူနှစ်ဖြာလေ့ရှိ...😁
ဆယ်တန်းပြီးတာနဲ့ အမနဲ့တူတူကျောင်းတော်ကြီးကိုရောက်... workshop မှာထိုင်.... ပခုံးပေါ် ခူယားကောင်ပြုတ်ကျ... ကျောင်းလျှောက်တော့ ဒီကျောင်းရောက်တာပဲ......💙 Whatever....i met with cool guys which is meant to be my best friends and thank you guys🥰
T1 (mech) မှသူငယ်ချင်းအားလုံးကိုသတိရလျက် ☺
ပထမဆုံးအချိန် အမြဲတမ်း မမှီတာရယ် သူငယ်ချင်း တွေဝိုင်းဖွဲ့ပီး ထမင်းချိုင့်ဖွင့်စားတဲ့ အချိန်ရယ်
ဦးမောင် ဆိုင်က အာလူး ထမင်းနယ်လေး ကို သိပ့်လွှမ်းတာက စလို့ ပြောလို့ဖြင့် မကုန်
Canteen လေးတွေတော့ upgrade လုပ်ပေးလိုက်ပါ ကိုငြိမ်းမောင် မသိရင် နွားတင်းကုတ် ဝင်ဝင်သွားသလို ခံစားမိခဲ့လို့✌️
မမေ့နိုင်တဲ့ အမှတ်တရတွေအများကြီးပါပဲ။ ကျောင်းပြီးသွားပေမယ့် အရမ်းသတိရရင် လာဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ်ပြီးလည်းလာပါဦးမည် ကျောင်းတောင်ပြန်တက်ချင်လာပြီ😍😍😍
Tutorial​ဖြေချိန်မှ အတန်းလူအကုန်မြင်ဖူးရတာ​တွေရယ် ဟို ကန်တင်းက ကြာဇံပြုတ်ချဥ်စပ်​လေးလည်းလွမ်းတယ် ​ပေါက်​ဖော်တစ်သိုက် ​ကျောင်းတစ်ကွင်းလုံးပတ်သွားရတာကိုလည်း လွမ်းတယ်
သတိရပေါ့ ကိုယ်တေက 1st batch သတိရပါတယ်ဗျာ
( )ရမ်းကိုပျော်တာ 6နှစ်တည်းမို့လို့ကွာ😔 ထပ်တက်ရရင်ကြောင်လို့ရသေးတယ်😁
ပြောမကုန်နိုင်တဲ့အမှတ်တရတွေ အများကြီးပါ ဖြူပြာဝတ်wytuကျောင်းသူဘဝကိုလွမ်းလိုက်တာ
ကျောင်းတော်ကြီးမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့workshopမှာတိုင်ဦးတိုင်း‌‌ တွေကစားကြအတန်းတက်နေတဲ့ချိန်အပြင်ကနေနာမည်တွေလှမ်းခေါ်ကြcanteenမှာ‌ သောင်းကျန်းကြပြောမကုန်နိုင်ဘူးအမှတ်တရတွေ😭😍🥰
ကျောင်းနောက်ပေါက်ထ ကျော်တက်ဖူးတာရယ် ဆံပင်ဆိုးလို့ လက်မှတ်မထိုးချင်လို့ ပတ်ပြေးခဲ့ရတာရယ် 😅
စာမေးပွဲနောက်ကျသွားတာအမှတ်တရဘဲ 2008-2014 batch
ကျောင်းသားရေးရာ အပေါ်ထပ်ထောင့်မှာ စာသွားလုပ်ရင်း ဖူးစာရှင် လက်ရှိအမျိုးသားနဲ့တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်😁
ကျောင်းပြီးခါနီးပြီမို့ မျက်ရည် နှစ်စက်လောက် လာကျ ပေးကြ
Canteen က စားစရာတွေကို လွမ်းတယ်........ ကန်သာကိုလွမ်းတယ်
အမေးတော့မရှိပါဘူးအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်ကျောင်းတော်ကြီးကကျမအတွက်အရမ်းအေးမြတဲ့အရိပ်ကြီး😁သို့မဟုတ် 😁အိမ်တလုံးအဖြူအပြာလေးတွေကအဟာရ😁သို့မဟုတ် 😁ထမင်း အိုးဒီနေရာဒီအရပ်မှာရပ်တည်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျောင်းတော်ကြီးကိုကျေးဇူးပါ
အမှတ်တရကတော့ မနက်ခင်းဆိုကိုယ့်မေဂျာစာသင်ခန်းထိ တကူးတက လိုက်ပို့ပေးတက်တဲ့ကောင်လေး ကန်တင်းရောက်ရင်လည်း သူ့ကိုသတိမထား ထားမိအောင်ကို ကိုယ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုက်ယူ ကိုယ်စားတာလိုက်စား ကိုယ့်ထက်ငယ်ပေမယ့် ပိုအရပ်ရှည်သလို ပိုချောတဲ့ကောင်လေးပဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခေါက်လောက်တော့ပြန်တွေ့ချင်မိပါသေးတယ်လေ⛈️
ကန်တင်းဆို စံပါယ်ဖြူက ကြာဇံချဉ်စပ် 🤗 ကျောင်းဘောလုံးပွဲ အသံ၀င်အောင် အားပေးခဲ့တာ😂 ကျောင်းနောက်ပေါက်က် ခိုးပြန်တာ အစုံပါပဲ😋 workshop မှာ သယ်ရင်းတွေအုပ်စုလိုက် သီချင်း‌တွေညည်းတာလဲ အမှတ်တရ 😍
Tပေတံကြီးတကားကနဲ့ 1st yrကျောင်းသူဘဝကိုလွမ်းတယ်❤
ကျောင်းရှေ့တွင် မြွေကိုက်ခံခဲ့ရခြင်း အမှတ်တရ😇
ကျောင်းဆင်းပြီဆိုရင် ကားပေါ်နေရာရအောင် လုတက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေ ပြန်သတိရမိတယ်
ကျောင်းတက်တဲ့၆နှစ်တာကာလတွင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကန်တင်းမှာပိုက်ဆံစုပြီးမုန့်တွေစားလိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက် နဲ့ပျော်ခဲ့ရပါတယ်♥️ 6BEနောက်ဆုံးနှစ်လေးကတော့အမှတ်တရပါပဲThesis လုပ်ရင်းပင်ပန်းခဲ့ရပြီး သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ဘွဲ့တူတူယူပြီး မခွဲခွာချင်ပဲ ခွဲခွာခဲ့ကြရတယ်🎈
Uni Thin Gyan မှာသင်္ကြန်ရေစိုလို့ Phone ပျက်သွားပါတယ်
စာမေးပွဲ ဖြေခါနီးမှ ကုန်းရုန်း စာလုပ်ရတာ သတိရတယ်
Physics Dep မှာ ဆရာ ၄ ​ယောက်တည်းရှိတုန်းက ဆရာမတဦးမို့အန်း​တွေချာချာလည် တပည့်​တွေများကြီးနဲ့​ပျော်ခဲ့
စာမေးပွဲတစ်ခါမှမအောင်လိုက်ဘူး 🙁 တတ်ခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်သိခဲ့တာဆိုလို့ အဂ်လိပ်စာဆရာမချောတာနဲ့ Archiက မိန်းကလေးတွေ တစ်ယောက်တစ်မျိုးကြောင်တောင်တောင်တွေဆိုတာပဲ
မိုးရေထဲ လျှောက်ပြေးနေတာကို ပြေးတဲ့နောက် လိုက်ပြီး ထီး လိုက်မိုးပေးတဲ့ ကောင်လေး 😅😊😊
ဖဲရူံးလို့ပြန်စရာကားခမရှိလို့လမ်းလျောက်ပြန်ခဲ့ရတာရယ်။အတန်းလစ်ပြီး အလယ်ကွင်းမှာဘောလုံးကန်ပြီးဆရာမတွေ့တော့ပတ်ပုန်းနေတာရယ်😂😂😂😂ဗရုတ်ကျခဲ့တယ် uni ကျောင်းသားဘွ။ပျောဆြာလေးတွေ😂😂ပြေဆြာအများကြီးကျန်ပေးမဲ့ပြောတော့ပု။ဒါနဲ့workshop မှာလဲကျနော်တို့ပြေးခဲရသေးတာ cctvတွေမတပ်ခင်ကပေါ့လေ😂😂😂
သူငယ်ချင်းတွေ T2 ကော်ရစ်တာမှာ ပုဆိုးကျွတ်ကျသူနဲ့၊ မိန်းကလေးအိမ်သာရှေ့ ပုဆိုးချွတ်ခံရသူနဲ့ စုံလို့။ အမှတ်တရတွေ။ 2009 ထင်တယ်။တော်ဂေါ်လီ မော်ကွန်းထိန်းဖမ်းလို့ ကျောင်းသားရေးရာရှေ့ဘောလုံးကန်နေရင်း က ပတ်ပြေးရတာတွေ။ မော်ကြီးက အတန်းချိန်မရှိဘူးလား မေးရင်ဖြေဖို့ အတန်းချိန်မရှိတဲ့ မေဂျာကို ကြို မေးထားရတာတွေ။ ကန်တင်းမှာ စော်လေးတွေ ငမ်းရတာတွေ၊ကြောင်ရတာတွေ။ ပြီးစီးစ T9နဲ့တူတယ်။ frwsherလေးတွေကို ဘော်ဒါတွေ စုပြီးငမ်းရတာတွေ။ EC Fresher welcome တိုင်း ကိုယ်ရအောင် ပွဲစီစဉ်ရတာတွေ။ T2 နားမှာ ပိုက်ကျော်ခြင်းခတ်ခဲ့ရတာတွေ။ကိုယ်တို့အခန်း T1 အောက်က မြေအောက်ကြီးမှာ တူတူပုန်းတိုင်း‌ဆော့ခဲ့ရတာတွေ။( မကြာပါဘူး အတွဲတွေ ၀င်ချိန်းတွေ့မှာစိုးလို့ ပိတ်လိုက်တယ်)။ အလယ်မိန်းလမ်းမှာ ဖိုက်တာ တွေ ဘော်ကန် ဖိုက် ကြတာတွေ။ အမှတ်တရတွေ အများကြီးပဲ။ အကုန်မမှတ်မိတော့ပေ။
ခု ကျွန်တော့် ဘော်ဒါတွေ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ 😂
အကောင်းဆုံးအမှတ်တရကတော့ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘက်ကရပ်တည်ပေးပြီး အားပေးတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းထက်ပိုတဲ့ အချစ်ဆုံးbffတွေနဲ့ ဆုံဆည်းခဲ့ရတာပါပဲ သူတို့နဲ့ အတူသွား အတူစား ပျော်စရာရော ၀မ်းနည်းစရာတွေပါအတူမျှ​ေ၀ရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေက ဘယ်တော့မှမေ့လို့မရမဲ့ အမှတ်တရတွေပါ ကျောင်းကနေ အ​ေ၀းပြေးထိလမ်းလျှောက်ခဲ့ဖူးတာရယ် ကျောင်းသင်္ကြန်တွေရယ် မေဂျာဘောလုံးပွဲတွေရယ် ပြောမကုန်အောင်ပါပဲ😍
WYTU မှာနှစ်အကြာကြီးကျောင်းမတက်ရပေမဲ့MEတက်တဲ့နှစ်တွေမှာအမှတ်တရတွေအများကြီးပဲ WYTUရဲ့ အမရာကျောင်းသူအဆောင်ကတော့အမှတ်တရအများဆုံးပါပဲ☺
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ် က တက်ချင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်း ပေါ့
အဆောင်၁၃နားမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အရပ်ပုပုကောင်မလေးကတော့ ကိုယ်ရဲ့လက်တွဲဖော် သောင်းကျန်းဖော်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လေ 😁🥰😍😘
BBထပ် ဆျော့ချင်ချင်တယ် ကျောင်းကကားလမ်းမှာဘောလုံးထပ်ကန်ချင်တယ် အဆောင်ပတ်ပြီးဘွန်ကြောင်ချင်တယ်ကန်တင်းထိုင်ပြီး ဟိုဘက်ကန်တင်းကိုငေးချင်တယ် ကျောင်းကမှာစားနေကျထမင်းဆီစမ်းနဲ့CPထပ်စားချင်တယ် Fresher WelcomeသွားပြီးQတွေသွားကြည့်ချင်‌ေသးတယ် ခုထိFAဖြစ်နေတုန်းပဲ😁😁
EC ကကောင်မလေးကိုစာမေး ပွဲနောက်ဆုံးနေ့မှာpurpose လုပ်တာတကယ့်အမှတ်တရပဲ. အဆောင်12ကနေ7ထိစကားတစ်ခွန်းပဲပြောခဲ့ရတယ်. သူနဲ့လည်းချစ်သူတွေမဖြစ်ခဲ့ပါ. တကယ်ကိုရိုးလွန်းတဲ့ကောင်မလေးအာ့နေ့ကသူငယ်ချင်းတွေပြန်ပြောတာကတော့ သူ့ခြေဖျားလက်ဖျားတွေအေးစက်တဲ့အကြောင်းပေါ့. ကျောင်းပီးမှစဉ်းစားပါရစေတဲ့. သူဒီcomလေးများတွေ့ခဲ့ရင်ကောင်းမယ် သူမက MMWK... ကျွန်တော် WPA ဆိုသူမှတ်မိလောက်ပါသေးတယ်. မသေခင်လေးတော့ဆုံချင်မိပါတယ်. သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလဲလွမ်းတယ် အဆောင်6ကြီးကိုလည်းလွမ်းတယ်
အမှတ်တရကတော့ ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့တစ်လျှောက် ရည်းစားမရခဲ့တာပါပဲ ရင်နာလို့မဆုံးဘူး ပြန်တွေးတိုင်း မျက်ရည်ဝဲမိဆဲပါ 🥺🥺
မ​​မေ့နိုင်တဲ့အမှတ်တရ​တွေအများကြီးပါ စံပယ်ဖြူကန်တင်းရဲ့ အားလူး​ချောင်း​ကြော်နဲ့​ကော်ဖီ​အေးက ကိုယ့်အကြိုက်​ပေါ့ ​သူငယ်ချင်း​တွေနဲ့ဝင်​ယောင်ပြီး မိုနိုပိုလီအ​ပျော်​ဆော့တာ ဖဲဝိုင်းထင်ပြီး ​မော်ကွန်းထိန်းဆီ​ရောက်တာက​တော့ အမှတ်တရပါပဲ
ဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တဲ့ကျောင်းသားဘဝကိုအလွမ်းဆုံးပဲ ဆရာ၊ဆရာမတွေအပေါ်ဆိုးခဲ့မိတာတွေ အတန်းမတတ်ပဲလုပ်ချင်တာလုပ်နေခဲ့တာတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘောလုံးကန် ဖဲရိုက် လူ့ဘဝရဲ့ အပျော်ဆုံးအချိန်တွေထဲကတစ်ခုပါ အသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါ ပြန်တမ်းတလွမ်းမောရတဲ့ အချိန်တွေက ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကြီးဆီမှာကျန်ခဲ့ပြီလေ
အမှတ်တရကတော့ ရန်ပွဲကြီးဖြစ်တုန်းက ယောင်ယောင်ယောင်နဲ ချိုင့်တွေဆွဲပြီးအဝိုင်းရောက်ဖူးတယ် 😁😁 ကန်သာက အာလူးချောင်းကြော် နဲ ့မရှိစားရတဲ့ ကြာဆံဆီချက် ၅၀၀ တန်နဲ့မော်ကွန်းထိန်း (နာမည်ပြောင် တော်ဂေါ်လီ) ဆရာမလိုက်လိkhဖဲဝိုင်းက ထပြေးဖူးတယ်အဖွဲ့လိုက် 😁😁 🤗🤗🤗
2005 အစမှာ ME2nd batch တက်ခဲ့အချိန်မှာ 🥰 လေးစားအားကျရတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေရယ်🙏🙏🙏 ချစ်ခင်ရသော အစ်မတွေနှင့် သူငယ်ချင်းများစွာ ရယ်🥰 ကျောင်းတော်ကြီးမှာ စာတွေအတူတူကြိုးစားခဲ့ရမှူတွေ သင်ယူခဲ့ရမှူကိုဟာတန်ဖိုးရှိခဲ့သော ဘ၀တစ်ခုပါပဲ🎉🎉🎉
သတိရတယ်လို့ ကျောင်းကိုတစ်ခေါက်လောက်တော့သွားချင်မိတယ် 💓
စိတ်သဘောထားပြည့်ဝတဲ့အချစ်တို့နဲ့ဆုံခဲ့ရတယ် အမြဲကူညီပေးတယ် ကျောင်းတတ်ရတာအပျော်ဆုံးနဲ့ အမှတ်တရများစွာတွေ အခုပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ပျော်နေဆဲပါပဲ လွမ်းနေမြဲပါပဲ
ကျောင်းတော်ကြီးစီမှ ပညာရေနို့ သောက်စို့ ခဲ့ရသည့်အပြင် ဘဝလက်တွဲဖော် အဖိုးတန် ချစ်ဇနီးလေးပါ ရရှိလာခဲ့သည်က ဘဝ အမှတ်တရပါ 🤓
2008/2009 မှာ work shop မှာ အတွဲချောင်းရ လို့ မြင်ရတွေ့သမျှတွေက အမှတ်တရ ပါပဲ
အခန်းနံပါတ်( ၇/၁-၄) ❤️
ဘဝအတွက် သူငယ်ချင်းတွေရခဲ့တယ်။ သင်္ကြန်နားနီးရင် ပွင့်တဲ့ပိတောက်တွေနဲ့ အဆောင်ရှေ့မှာရေပက်အိုးမဲသုတ်တဲ့ ကျောင်းသင်္ကြန်ကို မမေ့နိုင်ဘူး။
အမှတ်တရကတော့ အဲ့ကျောင်းကို ရွေးခဲ့မိတဲ့ နောင်တ ပဲ 🙃
ကျောင်းတော်ကြီးကိုလည်း လွမ်းတယ် ရွေလမင်းကန်တင်းက အမေနဲ့မပု ကိုလည်းလွမ်းတယ် ကန်တင်းမှာပဲ အချိန်ကုန်တက်တယ့် သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း လွမ်းတယ် ကျောင်းကားပေါ်က ကိုမြင့်ထွန်းကြီးကိုလည်း လွမ်းတယ် ကတ္တရာ လမ်းပေါ် ကတောင်းကျိုက်ပီး ဘောလုံးကစားခဲ့ရတာလည်းလွမ်းတယ် အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါပဲ 😁 မှတ်မှတ်ရရကတော့ ကျောင်းကပေးအပ်တယ့်ဘွဲ့မရတာလေးတစ်ခုပါပဲ😁
ကန်သာက ပသျှူးထမင်း ဆုကice coffeeသတိရပါရဲ့ ခု​တော့ ကန်သာမရှိတော့ဘူးကြားတယ် 😞
ဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိပဲ အးမ်းပျော်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်တေပေါ့တကယ်တမ်းပြန်ပြေးကြကြေးဆိုပြောမကုန်ဖူး၃၃၃သုံးသုံလုံးပေါ်မှာအော်ကြီးဟစ်ကျယ်သောင်းကျန်းခဲ့တာတေ မောပီးအိပ်ပျော်ခဲ့တာတွေပကာသနကင်းတဲ့ကျောင်းသင်္ကြန်နဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်ပွဲတော်ရုပ်တေက စုတ်တီးစုတ်ပြတ်ဖစ်နေတာတောင်ပျော်စရာကောင်းနေတာ ကူညီတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကြနောက်ကြနဲ့ပြောမကုန်နိုင်တဲ့အမှတ်တရတေပြန်လိုချင်နေတုန်းပဲ
အမှတ်တရကတော့ ကိုးနှစ်တက်ခဲ့ရတာပဲ ငလူးမသူငယ်တန်းကနေဆယ်တန်းပြန်တက်ရသလိုပဲ
ပျော်ရွှင်ခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်း ရသပေါင်းစုံနဲ့ အမှတ်တရတွေပြည့်နှက်လွန်းသော နေရာ......
အရင်လို ၁၇၆ကို တိုးကြိတ် ဇော်က ကသလို ခြေတဖက်မြှောက်ပီး ကျောင်းလာခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေကိုလွမ်းမိကြသေးလား
ကျောင်းလက်ရွေးစင်အသင်း အတွက် ပင်နယ်တီလွဲခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ထဲက ကို့ဘာကိုတာဝန်မကျေဘူးလို့ခံစားရပီးနောက်ပိုင်းလက်ရွေးစင်အသင်းထဲမဝင်ဖြစ်တော့ဘူး ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အကြွေးတခုလိုပဲ အမြဲအားနာမိတယ်ကျောင်းတော်ကြီးရယ် 💗💗💗တနေ့နေ့တော့ပြန်ပေးဆပ်သွားမှာပါ
ကျောင်း သကြန် ကိုလွမ်း
ကန်တင်းက အစားအသောက်တွေလွမ်းတယ် စာကြည့်တိုက်အဟောင်းနေရာလေးလွမ်းတယ် ကျောင်းပတ်လမ်းလဲလွမ်းတယ် ကျောင်းဝန်းတစ်ခုလုံးအမှတ်ရစရာတွေဘဲ လွမ်းတယ် 💙 အဆောင်တွေထောင့်က အချဉ်သုပ်လဲလွမ်းတယ် ပြောရင်းနဲ့ စားချင်လာပြီ 🤤
အမှတ်တရတွေ အများကြီးနဲ့ ကျောင်းတော်ကြီး 😍😍😍
ကျောင်းစတက်ရတဲ့ရက်မှာ စခင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့မိုးရေထဲမှာကျောင်းကနေ ဒဂုံဧရာအထိလမ်းလျှောက်သွားပြီးရွှေဧည့်သည်၁ကို ရေစိုစိုနဲ့စီးခဲ့ရတာအမှတ်တရဘဲ
ကျောင်းတော်ကြီး ဆယ်နှစ်ပြည့်ကြောင့် ကြင်ယာဖက် လေးကို တွေ့ခဲ့တာ ကိုတော့ မမေ့ 😁
ပထမနှစ်စတက်တဲ့ကလေးတွေက အမ workshop ကဘယ်မှာလဲမေးတာ တွေ့တဲ့အိမ်သာလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ် ဝင်သွားတယ် အမအာ့အိမ်သာကြိီးလေပြေတော့မှ မသိပါဘူး ဝိတ်လျှော့မေးတယ်ထင်လို့
ကျောင်းပီးလို့ လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးမှာ လုပ်ကိုင်ကြရတော့ တချိန်ကကျောင်းသားဘဝကိုတော့ လွမ်းမောတမ်းတမိပါတယ်ဗျာ
အမှတ်တရတွေက အစုံပါပဲ ပြောကုန်မှာတောင် မဟုတ်ဘူး😁😁😁
အမှတ်တရတွေတော့ အများကြီးပဲ ပြောမဆုံးပါဖူး🖤
ကန်သာကဦးမော်ရဲ့အာလူးချောင်းကြော်ရှိနေခဲ့လို့ ကျောင်းနေပျော်ခဲ့တာပါ 😁
😢 miss you guys
အမှတ်တရတွေများလွန်းလို့ ဘယ်တခုကိုရေးရမှန်းတောင်မသိဘူး သေချာတာတစ်ခုက အရမ်းပျော်ခဲ့ပါတယ်
ပြောမပြတတ်အောင်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ် ❤ ကျောင်းတော်ကြီးကို လွမ်းတယ်ဗျာ.......
ကျောင်းကြီးကို အရမ်းသတိရတယ် ပြန်လိုချင်မိတယ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ
Workshop မှာ ( )အရက်ခိုးသောက်ခဲ့တာတွေ☹️
Exam နီးမှ စာအသည်းအသန်လုပ်တာ😀 One Subject One Night ကပါသေး😀
ဂန္တဝင်က ကြာဇံချဥ်စပ် နဲ့ နို့ကြက်ဥ ပေါင်း စားချင်တယ်
အမှတ်တရတွေ များလွန်းတော့ ဘာရေးရမှန်းမသိဘူး ကျောင်းပြန်တက်ချင်တာပဲ သိတယ်
WYTU first batch!
ယွန်းဝတီမာ ပလိန်းတခွက်နဲ့ ထိုင်ငေးနေရတာကို အမှတ်ရ
176 333 243 39 54 86 ရွှေဧည့်သည်1 ရွှေဧည့်သည်2 အဲ့ဒီကားတွေ ပါတ်စီးပြီး ကျောင်းသွားခဲ့ရတာတွေကို သတိရပါတယ်
အဲ့ကျောင်းကတော့ မဟုတ် 😊😊 ဒါပေမယ့် အမှတ်ရစရာတွေ အများကြီး ပဲ😁😁
Hand phone လူတိုင်းမကိုင်ခင်ချိန်ခါမှာ ကျောင်းရောက်တိုင်း canteen မှာလူစု အခန်းသွား WYTU 2nd yr မှစလို့ ကျောင်းတော်ကြီးဟာ ကိုယ်တွေရဲ့ လူစုရာအရပ် 😝
WYTU ရဲ့ Master Plan ကိုရေးဆွဲခဲ့ရပြီးအုတ်မြစ်စီအခမ်းအနားလုပ်ခဲ့တဲ့ရက်မှာအဝင်လမ်းမှာရေတွေကြီးနေလို့Site ထဲကိုအခက်အခဲကြားကရောက်အောင်သွားခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရနေပါတယ်။ယခင်ခေတ်အခြေအနေအရပုံစံကိုအမြန်ပြီးအောင်ရေးဆွဲခဲ့ရတာမို့ Class room building တွေ Lecture theatre building တွေရဲ့ပုံစံတွေကိုတခြားတက္ကသိုလ်တွေကဆောက်ပြီးသား Type ပုံစံတွေနဲ့ဘဲ Master Plan ကိုရေးဆွဲခဲ့ရပါတယ်။အခုခေတ်လိုMain Building ကိုခန့်ခန့်ငြားငြားမဆွဲခဲ့ရပါဘူး။ဘွဲ့နှင်းသဘင်အဆောက်အဦးအတွက်တော့နေရာရာထားခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။Workshop building တွေကိုလဲHall type ဘဲအသစ်ရေးဆွဲ့ပါတယ်။စာသင်ဆောင်တွေတခုနဲ့တခုဆက်တဲ့Covered way တွေရာထားခဲ့ပေမဲ့ဆောက်ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာမသိတော့ပါဘူး။Hostelတွေနဲ့ ဆရာနဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာတွေလဲ Master Plan မှာမပါခဲ့ပါဘူး။အခုခေတ်ကျောင်းတက်နေကြမဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်နဲ့ဆရာတွေအတွက်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံကြရရင်တော့ချို့ယွင်းချက်များအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။
၂၀၀၆ -၂၀၀၇ ​ကျောင်းစတက်ချိန်က​နေက​နေ ခုချိန်ထိ ဆို ၁၅ နှစ်​တောင်ရှိ​တော့မယ် ပထမနှစ်ကစပီး ​ကျောင်းပီးတဲ့ထိ ၅နှစ်စာ ​ကျောင်းသားကဒ်​တွေခုထိရှိတုန်းဘဲ ❤❤ ​ကျောင်းတက်​နေရတုန်းကမသိသာခဲ့​ပေမယ့်.. ​ခု​တော့ဘယ်​တော့မှပြန်မရနိုင်​တော့တဲ့ ​ကျောင်းသားဘဝ အဖြစ်အပျက်​လေး​တွေကို ပြန်သွားချင်မိ​နေတုန်းဘဲ..... လွမ်းရယ်မ​ပြေ..
ကြာဇံပြုတ်ချဥ်စပ် တုန်ယမ်းဟင်းချို အာချောင်းအစပ် ကော်ဖီအေး အကုန်လွမ်းတယ်
အများကြီးပါပဲ။ compound ခန်းတက်တည်းကနေ ဘွဲ့ရတဲ့အချိန်ထိ။ မှတ်မိဆုံးကတော့ ဘုရင်နောင် ကုန်းကျော်တံတားဆောက်တော့ ၃၉ကို ဖင်ပူပြီး ချွေးပြန်တဲ့အထိစီးရတာပါပဲ။ 😂😂😂
အမှတ်တရတော့အစုံပါပဲ သိပ်အဖိုးတန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေပါပဲ​ေ၀းလွန်းလို့ ညည်းတွားခဲ့ပေမယ့် ရောက်လာရင်စိမ်းစိမ်းစိိုစိုနဲ့နောက်ကမ္ဘာလေးလိုအေးချမ်းသွားရတာစမြဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာတိုင်းကိုချစ်ရပါတယ် WYTU ရေ
အမှတ်တရကတော့များကြီးပဲ....သူငယ်ချင်းနဲ့ ကားပေါ်မှောက်ရက်လဲတဲ့အကြောင်းတော့ သူ့ကိုမြင်ရင် ခုထိရယ်ရတုန်း...အဆောင် 6နဲ့ 7ကြားမှာ..last year ဖြစ်ပီး တိုင်လုတန်းဆော့တာကြီးကတော့ ခုတွေးရင် ခုပျော်တယ်..ဆရာမတွေကိုလည်းမမေ့နိုင်သလို ကန်တင်းကြီးကိုလည်းသတိရပါတယ်..
သူငယ်ချင်း ၂ယောက် ထမင်းဖိုးမရှိလို့ စာသင်ချိန် ဖဲခိုးရိုက်တာ မော်ကွန်းထိန်း မိပြီး ရုံးခန်းခေါ်သွား ပြီးနောက်အဲ့ လိုတွေမလုပ်ဖို့ ဆုံးမရင်း မုန့်ဖိုး ပေးပြီး ပြန်လွှတ်ခဲ့🤣🤣🤣
အတန်းမရှိတယ့်ရက်ကန်တန်ရမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူထိုင်ပြီး ဂီတာတီးသီချင်းဆိုရတာကအမှတ်တရပဲ ရောင်တာပါကိုကတော့မတီးတက်ဘူး
အမှတ်တရများစွာနဲ့ ချစ်ချင်းများစွာ သံယော်ဇဉ်များစွာ
ဒုတိယနှစ် ကျောင်း သင်္ကြန်မှာ ကားပေါ်က ကောင်မလေး တယောက် ရေနဲ့လှမ်းပက်လို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး ချေမိသေးတယ်! ကားပတ်မောင်းရင် ဘေးကလိုက်စီးပီး တခြားသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို စချင်တာနဲ့ ကားကွေ့လိုက်တာ ဘေးကားနဲ့ ညိလို့ထွက်ပြေးပေမဲ့ မလွှတ်တော့ တောင်းပန်ပီး လျော်လိုက်ရသေးတယ်! အနောက်အဖော်လိုက်ပေးရင်း သူ့ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေမကြည်တာမသိပဲ နေခဲ့ဖူးတယ်! First year နှစ်မှာ နောက်လှည့်စကားများလို့ Eng ဆရာမ (ဆာတွတ် ဆရာ 😁) ပစ်လိုက်တဲ့ ခဲသားဘောပင်ကို မရှောင်ပဲ လွှတ်ခဲ့ဖူးတယ်! ကန်သာက ရောပရှူးအရသာကိုလည်း အခုထိအလွှတ်ရတုန်းပါ..... 😉😉
ငမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ စီနီယာအဆင်အပေါင်းကို လွမ်းပါတယ် 🤣
39 စီးရတာ အပျော်ဆုံးမလား😁
ပြောပြလိုက်ရင် အားလုံးအံ့သြသွားမယ့်အကြောင်းတွေ မဖွင့်ဟချင်ကြဘူးလားကွာ
အမှတ်တရကတော့ တဖုန်းဖုန်းကျနေတာပဲ 😁😁 . . စတာပါ နောက်တာပါ အရမ်းကိုချစ်စရာခင်စရာကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ဖွဲ့ တိုးလာတယ် 😊😊 ဒီလောက်ပါပဲ
ရည်းစားကြီး ငုတ်တုတ်နဲ့ကောင်မလေးကို ရည်းစားမရှိဘူးဆိုပြီး ဂျင်းအကြီးစားကြီး ကျွေးခဲ့တဲ့ နွားတသိုက်😒
ကျောင်းမှာကန်တင်းကပြန်လာတုန်းကသူငယ်ချင်းသုံးယောက်က'မေရယ်အထင်တော့မလွဲလိုက်နဲ့ဦး၊စာလွှာများရောက်မလာခဲ့ရင် မောင့်အပေါ်မှာမငြိုငြင်ပါနဲ့နော်'သီချင်းကိုဆိုပြီးအဆောင်၅ကိုဝင်လာခဲ့တာ ပါမောက္ခနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့တော့စာလွှာတွေdepartment မှာလာယူပါတဲ့ အဲ့ဒါWYTU နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်စရာထဲကအမှတ်တရတစ်ခုပါ
Uniပေါင်းစုံ ဘောလုံးပွဲမှာ ပလုံဖိုင်တွေချိန်းပီး သွေးစည်းဖူးကျတာလေး 😍😍
တက်တာသိပ်မကြာသေးတော့သိပ်မရှိဘူး🙄ည 7:30 ထိ အဆောင်9မှာ သင်္ချာတွက်ခဲ့တာတော့ရှိတယ်🤣
ယိုးဒယားကြာဇံပြုတ် ပရှုးနဲ့တုန်ရန်း 😕 ​ပြောရင်းတောင်စားချင်လာပြီ🤤
ကန်ဘောင်ဘေး / ဝက်သားဒုတ်ထိုး /ဘဲလိုက်ဆိတ်ခြင်း / roll call မပြည့် / စာမေးပွဲ တစ်နှစ်ကျ / fighter အုပ်စု / crush အယောက် ၅၀ 🙄
ကြာဇံပြုတ်ချဥ်စပ် ကော်ဖီအေး အာချောင်းအစပ် နဲ့ အတူထိုင်စားပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လွမ်းတယ် ၁၂၄ တို့ ၁၇၆ တို့စီးခဲ့ရတာ ကိုလည်းသတိရတယ် စာမေးပွဲဖြေရင် pencil heel နဲ့ စတိုင်အပြည့်ထုတ် သွားဖြေတဲ့ ကိုယ့်ကိုကို လွမ်းတယ် 😂😂
fresher welcome လာလုပ်တုန်းက onewayကေနဲ့ ဆန်းဘေးကလည်း အမှတ်တရဘဲ။ 39 bus ပေါ်က ပိုက်ဆံလာတောင်းတဲ့ တစ်ယောက်ကလည်း အမှတ်တရဘဲ။ ဒါဘဲ 😜😜😂😂
အခန်းထဲဘောလုံးကန်လို့ မော်ကွန်းထိုင်းလာဖမ်းတဲ့ အကြောင်းလေ
ကိုယ့်ရဲ့ ပထမဆုံးတက္ကသိုလ် 🥰
ပြောလို့မကုန်တဲ့ အမှတ်တရတွေမှ အများကြီးပဲ.... - 2nd year နဲ့ btech 1st ကို ၂ နှစ်စီတက်ခဲ့လိုက်ရတာ - ခုနောက်ပိုင်း သိပ်မတွေ့ရတော့တဲ့ ကျောင်းကားယဥ်ကျေးမှုကို မှီခဲ့တာတွေ...ကိုယ် တွေနှစ်တွေတုန်းက ကျောင်းမှ ကိုယ်ပိုင်ကားဆိုတာ တွေ့ရခဲတယ်... ညနေကျောင်းဆင်းချိန်ဆို တစ်ကျောင်းလုံး ကျောင်းကားတွေအပြည့်...ပျော်စရာကြီး - စိတ်ကူးတောင် မယဥ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောင်းရဲ့ activities တွေမှာပါဝင်ခဲ့ရတာ - အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးကတော့ BE တန်းရောက်မှ ခင်ပြီး ခုထိလည်း ချစ်နေကြဆဲ ခင်နေကြဆဲ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေလိုဖြစ်သွားကြတဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်း တစ်စုနဲ့ BE တန်း တစ်နှစ်လုံးမှာ Fresher Welcome အပါအဝင် ပွဲတော်တော်များများကို ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ခဲ့ကြရတာကတော့ အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးပဲ.. - ဘဝအတွက် အမှတ်တရ အဖြစ်ဆုံးဆိုရင်တော့ ဘဝလက်တွဲဖော် ကို ပါ ရခဲ့တာပါပဲ(ခုတော့ရန်ဖြစ်ထားတယ်😅😅)
ကျောင်းတက် ပျင်းတဲ့ကိုယ့်ကို အိမ်တိုင်ရာရောက် မိတ္တူတွေဆွဲပြီး စာလာသင်ပေးတဲ့ လူဆိုးမကြီးများကို လည်း အမှတ်ရတယ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စိတ်ဆိုးနေတုန်း အပြင်ကကြောင်တောင်တောင် လာရပ်နေတဲ့လူကို ရန်သွားတွေတဲ့ လူကိုလည်း သတိရတယ် (ပိန်သာပိန်တာ Fighter ပုံနဲ့ သွားဖြဲတာ🤣🤣🤣) ကိုယ်က EC ပေမယ့် ငယ်ငယ်ထဲက တွဲတဲ့ သူငယ်ချင်းက Civil ဖြစ်နေလို့ တခါတလေ civil ခန်းထဲ ကြောင်တောင်တောင် လိုက်ထိုင်တာလဲ သတိရတယ် 🤣🤣🤣 Civil သွားရင် EC က စကားနာထိုး 😂😂 EC သွားရင် Civil က စကားနာထိုး 😂😂 အမှန်က ခင်တာထက် ရည်စားမရှိလို့ ရစ်စရာမရှိလို့ ကိုယ့်ကိုရစ်ကြတာ 😝😝😝
ကိုယ်တွေအရင်ဆုံး First Betch ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ကိုယ် နဲ့ရွယ်တူ ထက် ဂျူနီယာလေးတွေနဲ့အတွဲများခဲ့ လူချစ်လူခင်ပေါသလို မနာလိုသူတွေလည်းများ စာကြိုးစားခဲ့တဲ့ရလာဒ်က B-tech First ကနေ Master First year ထိ 5yrs ဆက်တိုက် Roll 1 ကို ချန်ပီယံ ယူထားတာ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ဆီက ပြန်မလုနိုင်ခဲ့တာပဲ.... မိဘတွေအတွက်ဂုဏ်ယူစရာ သမီးဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ အောင်စာရင်းထွက်တဲ့ညတိုင်း.... ဝတုတ်လေးပေမယ့် ကိုယ်လည်း ကျောင်းမှာ Popular တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်နော် ... အတန်းလည်းလစ်တယ် ပျော်လည်းပျော်တယ် အတန်းလည်းမှန်တယ် စာလည်းလုပ်တယ် သူများကိုလည်းစေတနာထား ရှဲလ်ပေးတယ် ကိုယ့် Note တွေ Copy ပေးတယ်.. ရဲဘော် ၄ယောက် ရှိပေမယ့်တနှစ်တယောက်ထားသွားတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ B-tech First မှာ တော့ကိုယ်တယောက်တည်းပဲ ကျန်တယ် .. ရည်းစားလေးတောင်မထားဖြစ်ခဲ့တာလည်းတကယ့်အမှတ်တရ ပါပဲနော်လို့ ကျောင်းတော်ကြီးကိုချစ်တယ် လွမ်းလည်းလွမ်းတယ် ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် .... Chemical Engineer (2005 - 2010 )
crush လေး​ကျေးဇူးနဲ့ canteenတခုမှာပဲ ၅နှစ်လုံးထိုင်ဖြစ်သွားတာ😁😁 ကျမလို ပေါ​ပေါ​ေတာ​တော သူငယ်ချင်း၅​ယောက်ရခဲ့တာ😜 နောက်ဆုံးနှစ်မှာ လူရွှင်​တော်လုပ်ခဲ့တာ😅 အ့ဒါ​တွေက ပိုပီးအမှတ်ရဆုံးပဲ 😆😆😆
အဆိုကောင်းလွန်းလို့ ပါချုပ်ဆီလက်မှတ်သွားထိုးခဲ့ရ(မှတ်ချက်-ခုံခေါက်ပြီးသီချင်းဆို)😂ကိုယ်ဟဲနေတဲ့အချိန် ပါချုပ်လှည့်တာနဲ့သွားတိုးလေတော့😁 guideလိုက်သင်တဲ့အချိန်ဆို အနေတည်သလိုထင်ရပေမယ့် Civilကကောင်မလေးကို လိုက်ကြောင်တဲ့အခါဆိုရင်တော့ မပြောရဲတာနဲ့ရာဇာနေဝင်းစတိုင်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာမျိုး😂 mechပေမယ့် electricalက လေဒီလေးတွေစာလာမေးခံနေခဲ့ရတဲ့ ဘဒို🤔
အမှတ်တရဒေကတော့အများကြီးပဲ ၂၀၁၄ ကစပီးနှစ်တိုင်းရဲ့ Fresher welcome 🥳 မေဂျာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး at အဆောင် ၉၊ workshop၊ အဆောင် ၁၁ 😂 နှစ်စမှာ စိုးရိမ်ချစ်သီချင်းနဲ့ စင်ပေါ်တက် feel ခဲ့တာဒေ မေဂျာဘောလုံးပွဲမှာ ရန်အဖစ်ရဆုံးက EP မေဂျာနဲ့ 🤣 ရေဘေးသင့်တုန်းက ‌EC မေဂျာကလူဒေစုပီး ဖျော်ဖြေရေးအလှူခံထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဒေ မေဂျာ Trip သွားခဲ့တဲ့အချိန် ❤️ အိမ်ကမလွှတ်လို့ မသွားရင် စာမေးပွဲကျမှာဆိုပီး အိမ်ကို ဂျင်းထဲ့ပီးမရမကလိုက်ခဲ့တာဒေ ရီးစားဟောင်းနဲ့ သူ့အတန်းလိုက်တက်ပီး Tuto လိုက်ဖြေပေးတဲ့အချိန်ဒေ 🤣 Archi ကသူငယ်ချင်းဒေနဲ့ ပျော်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ဒေ စာမေးပွဲဖြေတိုင်း ၆နှစ်လုံး အချိန်ပြည့်မထိုင်ဖူးခဲ့တာက အမှတ်တရ 😂 ၄နှစ်လောက်တွဲခဲ့တဲ့ရီးစားဟောင်းနဲ့ပြတ်ပီး အဆောင် ၇မှာစတွေ့ခဲ့တဲ့ messy hair နဲ့ကောင်လေး 🖤 (ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိခင် အဆောင်၇မှာစသိခဲ့တာနော် 👀 တချို့ဒေက အဲ့တုန်းက ဝုန်းသေးတယ် king မို့ ဘာမို့ညာမို့ နဲ့ << ဒါကစာကြွင်း) သူ့ကြောင့်အဆောင် ၁၀ခနခနသွားခဲ့တဲ့နှစ်ဒေ 🖤 ၂၀၁၈ စာမေးပွဲဖြေခဲ့တဲ့အချိန် Pocari sweat နဲ့အမှတ်တရဒေ 🖤 ၂၀၁၈, ၂၀၁၉ က သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရဒေချည်းပဲ 🤣 လွမ်းလိုက်တာ ကောင်းတဲ့အမှတ်တရဒေရော မကောင်းတဲ့အမှတ်တရဒေရော 👀
WYTU အမှတ်တရကတော့ စော်မရခဲ့တာပဲ
၁၀နှစ်ပြည့်ပွဲကတော့ ဘဝရဲ့ ကျောင်းသားဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံး အမှတ်တရပါပဲ
ကျောင်းတုန်းကအမှတ်တရတွေဆိုတော့ သတိရမိသမျှလေးတွေပြောချင်သွားတယ် 1) crush လမ်းလျောက်လာတာကို အငမ်းလွန်ပြီး အုတ်နံရံနဲ့ ခေါင်းနဲ့စောင့်ဖူးတယ် ကို့သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ ထူဖို့အသာထား ရီရင်ရင် လဲကျတဲ့သူတောင်ရှိတယ် 2) ခုလို သီတင်းကျွတ်အချိန်ဆို ဗျောက်အိုးတွေကို workshop ကအတွဲတွေကြား ကန်တင်း ကအတွဲတွေကြား ပစ်ထဲ့ပြီးပြေးတယ် 3) April Fool မှာ ကိုယ်တွေခင်တဲ့ အရမ်းရှက်တတ်တဲ့ အကိုကြီးကို ခေါင်ရမ်းပန်းတွေ အတန်းထဲ လိုက်ပေးဖူးတယ် ‌ ကိုယ်တွေအဖွဲ့က ဆိုးလွန်းလို့ သရဲငါးကောင်လို့တောင် အခေါခံရတာ ကန်တင်းမှာပဲ ကျောင်းတက်တာ 😁ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး စာမေးပွဲနီးရင် စာတွေစု မသိတဲ့စာတွေ‌‌ဆရာတွေကို မေးနဲ့ ကိုယ်တွေဆရာ ဆရာဦးထွန်းမြင့်ဆို 🙏🙏🙏 undergrad ကနေ master ပြီးတဲ့ထိကို အဆိုးအပေကိုယ်တွေကို စာတွေရှင်းပြ (ကိုယ်တွေဘယ်လောက်ဒူဒူ မငြိုမငြင်)နဲ့ အမှတ်တရတွေဆိုတာ ပြောမကုန်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားဘ၀က အရမ်းကို ပျော်ခဲ့ရတာ အခုချိန်အခက်အခဲတွေကြောင့် ဘယ်လိုပဲစိတ်ညစ်ရ ညစ်ရ ကျောင်းတုန်းကအမှတ်တရလေးတွေ တွေးမိရင် အမြဲပြုံးနေရဆဲ #wytumemories
ဘဝရဲ့အကြီးဆုံး အမှတ်တရတွေပါပဲ ကျောင်းဆင်းချိန် ဖယ်ရီလူစုံဖို့စောင့်နေတုန်း ဘော်ဒါတွေပေါင်းပီး တစ်ကောင်ချင်းစီကို အတွင်းခံပဲကျန်အောင် ပုဆိုးလိုက်ချွတ်တာ ကျောင်းထိပ် ကြီးမှာ ဖယ်ရီပေါ်က မိန်းခေးတွေ ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ လိုက်မေးတော့ သိတောင်သိပါဖူးဟယ်တဲ့ ( )ရှက်ကွဲတဲ့ကောင်တွေ အကုန် အကောင့်ထဲရှိတယ် 😁😁😁😂
ပျော်ခဲ့တယ်ခုတော့လွမ်းတယ်ပြန်တက်ချင်သေးတယ် စာမေးပွဲတွေလဲဖြေချင်နေသေးတယ် 😄
၅ နှစ်တာအတွင်း တခုမှ မကနိုင်တာရယ် Semester တခုကို စာတအုပ်ရေးရင် ပေါင်းချုပ်တောင် ထုတ်လို့ရနိုင်တယ် အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရများဆီသို့ - အရမ်းပူတာကြောင့် ချွေးတွေမတိတ်နိုင်အောင်ထွက်နေလို့ ဝိုင်းပြီး ရပ်ခပ်ပေးခဲ့တဲ့ ပထမနှစ်က သူငယ်ချင်းအသစ် - ကျောင်းမတက်ဘဲ သူငယ်ချင်းများစွာထံမှ မတူညီသောlecture တွေကို copy ဆွဲခဲ့ရတဲ့ Canteen က Copy ဆိုင်လေးတွေရယ် - စာမရှင်းလို့မေးရင် စိတ်ရှည်စွာ ရှင်းပြတတ်တဲ့ ဘော်ဒါအရင်းကြီးတွေရယ် - ဖြေချင်တာဖြေပြီး စာမေးပွဲအခန်းထဲက အစောဆုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားတတ်တာတွေ - နောက်ဆုံးနှစ် school project မှာ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတယောက်၏ တိုင်ကြားမှုကြောင့် တဖွဲ့လုံး ဌာနမှူး ရုံးခန်းရောက်ရတဲ့အချိန်လေးရယ် *** အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ကျနော်လည်း WYTU ထွက် Civil အင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါ Drawing တွေတွေ့ရင် မနေနိုင်ဖတ်မိသလို့ Construction project တွေ မြင်ရင်လည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ ရင်ခုန်နေတုန်းပါပဲ WYTU Batch 2015 - 2016
ကျောင်းတံခါးပိတ်ထားလို့ ကျောင်းရဲ့ခွေးတိုး ပေါက်ကနေ ခိုးပြန်ဘူးတယ်😂 ဘုကန့်လန့် အပျိုကြီးတစ်သိုက်နဲ့ ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တယ်🤩
ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့နေရာတိုင်းကအမှတ်တရတွေချည်းပဲ ကျောင်းတော်ကြီးကိုလဲလွမ်း🥰 အဖြူပြာuniformလေးကိုလဲလွမ်း💙 We love💙 WYTU
Wytu က အချစ် ကိုလွမ်းလို့ရသေးလား 😆😆
အလွမ်းဆုံးကတော့ ကျောင်းသင်္ကြန်ပါပဲ ရေပတ်တဲ့ရက်ကတစ်ရက်ထဲမဟုတ်ပဲ ၁ပတ်လုံးရေပတ် ကားပေါ်ရေပုံးတင်ပြီး ဟိုဘက်ကားဒီဘက်ကားလှမ်းပတ် အခုခေတ်လို EDM ဘာညာမရှိသေး သီချင်းလဲဖွင့်ခွင့်မရတော့ ရီမောသံ စနောက်သံတွေ အပြည့်နဲ့ပေါ့ T1 ခေါင်မိုးပေါ်တတ်တာလဲလွမ်းးးးး အဆောင် ၆ လဲလွမ်းးးးး အသဲပုံရေကန်မဟုတ်ပဲ သာမန်ရေအိုင်ပုစိလေးထဲက ကန်ဘောင်ဆိုပြီး သွားသွားထိုင်ခုံလုရတာ workshop ထဲလဲတိုင်ဦးတိုင်းဆော့သေးတာ first year တုန်းကဆို ကျောင်းသားရေးရာရှေ့လဲ ဘောလုံးကန်သေးတာဗျာ အမလေး ပြောရင်းနဲ့ ရည်းစားဟောင်းတောင် လွမ်းသလိုလို ဘာလိုလို
အထက်တန်းက ကျောင်းတွေပြောင်းရတော့ life time မှာ အကြာဆုံးတက်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်း 😅
ကန်တင်းအပေါက်ဝမှာ ပုဆိုးကျွတ်ကျတာပဲ လက်ထဲက အာလူးချောင်းကြော်ဗူးကတော့ ပြုတ်မကျဖူး
WYTU...👷👷👷 Civil Batch-3
ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အရာတိုင်းလွမ်းတယ် 🥰
ဘဝရဲ့ အရေးပါတဲ့ အမှတ်တရများစွာက ဒီမှာပါ ဒီထဲမှာမှ အမှတ်အရဆုံးက ဆရာကြီးက ကျနော့ကို တူသားရင်းပမာ လမ်းပျောက်နေချိန် depressed ဖြစ်ခဲ့ချိန်တွေ တကူးတကခေါ်ပီး ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ knowledge sharing ,Advices တွေ motivationအများကြီး ပေးခဲ့ ဩဝါဒတွေ ခြွေ ခဲ့တဲ့တစ်နေ့ကိုတော့ အမှတ်အရဆုံးပါပဲ
ကျော်နဲ့စားခဲ့တဲ့ သီးစုံဖျော်ရည်၊ ကျော်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့ သူများမကောင်းကြောင်း ကိုယ်ကောင်းကြောင်းတွေ၊ ကျော် ကျော် ‌ဪ ... မိကျော် 😂 ကျောင်းနဲ့ပတ်သတ်သမျှ အမှတ်တရတိုင်းမှာတော့ ထင်ကျန်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း‌တွေရဲ့ အပြုံးတွေ။ 🤗 အယောက်စီတိုင်း။ 💖 mentioned မခေါ်တော့ဘူးနော်။
ကျောင်းဖွင့်ရင်မတက်ချင်ဘူး ပိတ်ရင် တက်ချင်လာရော
T2 Workshop အဆောင် 8 😁😁
There were so many 😭 Thanks for giving me loving , amazing , loyal , talented and beautiful friends ❤❤❤
ဘဝရဲ့ပထမဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကို သိခွင့်မြင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့နေရာ အကောင်းရောအဆိုးရော ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့နေရာ ♥️♥️♥️♥️
1st Year to BE အထိ ကျောင်းပြေးမလား😁ခြံစည်းရိုးကျော်ထွက်မလား😁 အတန်းလစ်မလား 😁 ကန်တင်းသွားမလား 😁 တစ်ယောက်က လစ်မယ်ဆိုတာနဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံးလစ်ကြတဲ့ စည်းလုံးမှုအရမ်းကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးနဲ့ ၅နှစ်တာ ကာလမှာ ပျော်ရွှင်ခြင်း ဝမ်းနည်းခြင်းများစွာဖြင့် ကျောင်းတော်ကြီးကိုလွမ်းမိ ............❤️
ပြေးမြင်မိသော ..တစုံတယောက် .. 🙈🙈
(၅) နှစ်လုံးကို လွှတ်ပျော်တာ 😂 အဲ့အပျော်က တစ်သက်လုံးပြန်မရနိုင်တာမျိုး ❤️
ဆယ်နှစ်ပြည့်ပွဲတုန်းကတော့ လူအရမ်းများပြီး Gandamar whole sale က Hall ကြီး ပြိုကျတော့မှာမလို့ ကျောင်းသားတွေကို အတင်းပြန်လွှတ်ရတယ် 🤣🤣🤣🤣
memories bring back..
Vivaမှာ ကို့ဘာကိုသေအောင်ရှက်သွားလို့ မေးတဲ့ဆရာကို တွေ့တိုင်း ပြေးပြေးပုန်းပီး နောက်ဆုံး မဖြစ်မနေ သင်ရတော့မှ ထွက်မပြေးတော့တာမျိုး BTech ကို -င်ပူမိပြီး ၂ခါ ထပ်ဝင်ဖြေရလို့ စနစ်သစ်နဲ့နှစ်ထပ်တိုးတတ်ခဲ့ရတာမျိုး စာမေးပွဲဖြေမှစစီးတဲ့ဖယ်ရီက မခေါ်ဘဲထွက်သွားလို့ လှိုင်သာယာဆိုမလိုက်ချင်တဲ့ Taxi ကို တောင်းတောင်းပန်ပန်ပို့ခိုင်းခဲ့ရပီး တလမ်းလုံးလည်း ငိုယိုပီး ဘာစာမှမကြည့်နိုင်(စာပိုင်နေလို့သာပေါ့ 😜) ဌာနမှူးနဲ့ဆရာတွေကူညီပေးလို့ စာမေးပွဲမကျခဲ့တာမျိုး နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်း အမှတ်တရကော အမှတ်မရချင်တာကော အများကြီး..
We ❤️ WYTU Forever ... Loads of memories 🤣
အမှတ်တမဲ့မှသည် အမှတ်တရများဆီသို့.... #2013#
ကျောင်းသိပ်မတက်လို့လားမသိဘူး.. အမှတ်တရ မရှိသလိုပဲ 🙄🙄
ဦးမောင်ဆိုင်က ကြက်ဥချဉ်စပ် 🙄😔
ဘဝအတွက် အ​ရေးပါတဲ့ လူ​တွေ ​တော်​တော်များများကိုWYTU မှာပဲ​တွေ့ခဲ့တယ်❤
💜Comment ​တွေဖတ်ပြီး...အရင်ချိန်​တွေ ပြန်​ရောက်သွားသလိုပဲ💜
အမှတ်တရတွေကတော့ များလွန်းလို့ နောက်ပြန်ရစ်ကြည့်မှပဲ သိတော့မယ်😅
ကိုယ်ကတော့ အမှတ်တရ သိပ်မရှိခဲ့ဘူး အမှတ်တရ ရှိတဲ့သူတွေ ဝင်မန့်ဖို့ 😁
အဲ့တုန်းက အဆောင်၅ထောင့်က သရက်သီးသုပ်လဲကြိုက်တယ်။ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ တစ်ရှုး ဖြုန်းခွင့်ပေးတဲ့ စံပယ်ဖြူလဲသတိရတယ်။ ကျောင်းအခန်းကိုမဝင်ပဲ တစ်ခန်းအကျော်က အခန်းလွတ်ထဲ ဗေဒင်ဝင်ဝင်တွက်တာလဲ သတိရတယ်။ အတန်းထဲမယ် အလှပြင်တာလဲ သတိရတယ်။ အဆောင်ထောင့်က ဝရံတာမှာ ထိုင်ပြီး လေပစ်ကြတာတွေလဲ ရှိတယ်။အမလေးများလိုက်တာ၊ ရေးစရာအများကြီးကျန်သေးတယ်၊။ အဓိကက စာမလုပ် အတန်းမတက်ခဲ့တော့ ရေးစရာကတော်တော်များတာပဲ🤪🤪🤪
BE နောက်ဆုံးနှစ်အထိ အဆောင်၅မိန်းကလေး အိမ်သာရှေ့ မုန့်ဆိုင်မှာ အုပ်စုလိုက် အထိုင်ချပီး civil သူလေးတွေကို ဂရုတစိုက် ကြည့်ရှုခဲ့တာပဲ 😂😂😁
တောင်ပေါ်ရှမ်းကန်တင်းမှာ တနေ့ကုန်ထိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ....
မှတ်မှတ်ရရ First year တုန်းက EC ကကောင်မလေးကို ရည်းစားစကားလိုက်ပြောတော့၊ သူက ဝေလငါးကောင်လုံးကင် လုပ်ကျွေးနိုင်လားမေးတယ်။ ပေါက်တတ်ကရတွေချည်းလုပ်ခိုင်းတာဗျာ။ နောက်ဆုံး ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေး သွားပေးတော့ ဘယ်ယောကျာ်းမှ အထင်မကြီးဘူးပြောလို့ စာအုပ်လေးကို ကျောင်းမုခ်ဝမှာတင် ဖြဲပစ်ခဲ့တာ။ အခုတော့ ကျွန်တော်လည်း 7နှစ်ကျော် rs နဲ့။ သူကတော့ rs ရှိလိုက်၊ မရှိလိုက်နဲ့ပဲ 🤣
မြွေမကြောက် ကင်းမကြောက် ဖွန်ကြောင်ရေးအတွက် ဖြတ်ဖူးတယ် 🌝 ကံကောင်းလို့ မောင်ကြီးစနိပ်နဲ့ လွဲခဲ့တာ 😌
ကျန်သေးတယ် full uniform မဝတ်ရင် ဆံပင်ဆိုးရင် ကျောင်း အပေါက်ဝမှာ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာ(ကိုယ်တေ က လိမ္မာတော့တခါမှမထိုးဘူးဖူး😌) ကန်တင်းက အပြန် ခူးယား ပြုတ်ကျလာတာတွေ၊ 2nd yearတုန်းက သူငယ်ချင်းနဲ့ ကျောင်းတပတ်ပတ်ကြည့်တာ (workshop ကို ပထမဆုံးရောက်ဖူးချိန်)၊ မမတွေ အလှပြင်တာ ခိုခိုးကြည့်တာ၊ သံကြိုးနဲ့ပိတ်ထားတဲ့အနောက်ပေါက်ကို အရှေ့ပေါက်သွားပြန်သွားရမှာပျင်းပြီး ရအောင်ထွက်တာ😅၊‘ဟို’ က ပရူးထမင်း နေ့တိုင်းနီးပါးစားတာ၊ ကန်တင်းက မိတ္တူဆိုင်ကိုလုပ်ကျွေးတာ၊ Btech, BE “*” မပါမှာစိုးလို့ သေကျက် ဆုတောင်း အောင်စာရင်း ကြည့်ရင်ခုန်၊ ၁၂၄, ၃၉, ဘရင့်နောင် အောက်လမ်းကားတွေ၊ IT က ဆရာမအားလုံး ❤️၊ Btech, BE ၂နှစ်လုံး ဘွဲ့ကို အဝေးရောက်ပဲယူခဲ့တာ​တွေ 🙂... အများကြီးပါပဲ Love u, WYTU ❤️❤️❤️ 2011-2016 IT ကျောင်းသူ
အမှတ်တရတွေအများကြီးဘဲ ပြောရင်တော့ကုန်မယ်မထင်ဘူး အတူတူကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ဘော်ဒါတွေကိုလည်းလွမ်းတယ် အတန်းလစ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ workshop ကိုလည်းလွမ်းတယ် canteen ကိုလည်းလွမ်းတယ် တစ်နေ့တော့လာလည်ဦးမယ်
ဘော်ဒါတာတွေနဲ့ရော😍 ၊ Exတွေနဲ့ရော😎 သူတို့နဲ့အတူကျောင်းပြေးပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ ရင်ခုန်ရဆုံးပဲ။ မှတ်မိနေသေးတယ် ၊ တစ်ခါက ကျောင်းတက်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ဘာသာရပ်တစ်ခုက Tutorial ညနေပိုင်း ရုတ်တရက် ကောက်စစ်မယ်ဆိုလို့ အမှတ်လျော့မှာစိုးပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပြီးချင်း JS ကနေ ကျောင်းကို အပြေးအလွှား Bus ကားစီးခဲ့ဖူးတယ် 😁🤣
အားလုံးကတိုက်ဆိုင်နေလို့ ပြန်ပြောရင် တစ်ထောင့်တညဘဲ... တစ်နှစ်ပတ်လုံးမွေးနေ့ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးရော, နေ့တဝက်ကျောင်းကလစ်ပြီး အကင်လုပ်စား သရဲကားကြည့်ခဲ့တာတွေရော, နောက်ပေါက်ခြံစည်းရိုး ရော UNO ရော, ကျောင်းစတက်တဲ့ရက်ထဲက အမှတ်တရတွေနဲ့ ရွှေဧည့်သည် ကားကြီးရော, The Love နဲ့ ဟို canteenရော,,, (Crush အပေါင်းနဲ့ Ex အပေါင်း သူတော်ကောင်း တို့ကိုရောပေါ့ !!!)
2009-2010မွာ AGTI ပီးခဲ့ေပမယ့္ ရည္းစားတစ္ေယာက္မွမရခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္တရ🤣
5နှစ်ဆိုသလောက်ဘဲ အမှတ်တရတွေကအများကြီး သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုသတိရတယ် 🥰
တစ်ခါလောက်ဆရာကန်တော့ပွဲလာပီး သူငယ်ချင်းတေနဲ့တွေ့ချင်တယ် ဆရာတေကို ကို့လုပ်အားခလေးနဲ့ကန်တော့ချင်သေးတယ်ဗျာ။
2010-2011 MP B ခန်းကသူငယ်တွေအရမ်းသတိရတယ် ပြန်ဆုံချင်တယ်
Uni Life ကို အရမ်းသတိရတယ် သူငယ်ချင်းတွေ ကို ပိုသတိရတယ် တစ်ယောက် တစ်နေရာစီ ရောက်နေပေမယ့် ငါ့လိုပဲ မင်းတို့လည်း သတိရမယ် လို့ ထင်တယ် !
ကဲ ကဲ အမှတ်တရအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတဲ့ 2011-12တုန်းကEC majorကQueen ကသူ့အခန်းထဲကသူငယ်ချင်းဆီကိုယ်ကသွားလည်တာ သူကကိုယ့်အနောက်ကနေကိုယ့်ကိုမျက်နှာပြောင်တာ သူငယ်ချင်းကမျက်စာပစ်ပြတော့ကိုယ်ကနောက်လှည့်ကြည့်တာသူ့နဖူးနဲ့ ကိုယ့်နဖူးတိုက်မိတာကတော့တကယ့်အမှတ်ရဆုံးပဲ... သူက👑Queen ကိုး😁😁😁